Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Nzira Itsva Inoenda Kukurumidza COVID-19 Kuongororwa Yakaiswa muGoridhe
Vatsvagiri vakashandisa goridhe nanoparticles kugadzira itsva molecular diagnostic platform iyo inoderedza zvakanyanya nguva inodiwa kuti COVID-19 ionekwe.
Kukurumidza kupararira kweCCIDID-19, chirwere chinokonzerwa nehutachiona hweSARS-CoV-2, chagadzira dambudziko rehutano hweveruzhinji pasirese. Kuonekwa kwekutanga kweCOVID-19 nekuzviparadzanisa nevamwe ndiko kwakakosha pakudzora kutapurirana kwechirwere uye kudzivirira vanhu vari panjodzi. Iyo yazvino chiyero cheCCIDID-19 yekuongororwa ndeye reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR), nzira umo majene evhairasi anoonekwa mushure mekuita kuwanda kutenderera kweamplification. Nekudaro, nzira iyi inotora nguva, ichigadzira yekudzosera kumashure munzvimbo dzekuongorora uye zvichikonzera kunonoka kuongororwa.
Muchidzidzo chechangobva kuitika chakaburitswa muBiosensors uye Bioelectronics, vaongorori kubva kuKorea neChina vakaunza riini nanotechnology-yakavakirwa papuratifomu inogona kupfupisa nguva inodiwa kuti COVID-19 kuongororwa. Yavo pamusoro-inosimudzira Raman scattering (SERS) -PCR yekuona chikuva-yakagadzirirwa kushandisa goridhe nanoparticles (AuNPs) mumakomba eAu 'nanodimple' substrates (AuNDSs) -inogona kuona hutachiona hwemajini mushure me 8 chete kutenderera kweamplification. Icho chinenge chikamu chimwe muzvitatu chenhamba inodiwa neyakajairwa RT-PCR.
"Conventional RT-PCR yakavakirwa pakuonekwa kwemasaini efluorescence, saka maawa 3-4 anodiwa kuona SARS-CoV-2. Kumhanya uku hakuna kukwana tichitarisa kuti COVID-19 inopararira sei nekukurumidza. Taida kutsvaga nzira yekucheka nguva ino zvishoma nehafu, "anodaro Prof. Jaebum Choo, vachitsanangura chikonzero chekudzidza. Sezvineiwo, mhinduro yakanga isiri kure. Muchidzidzo chakapfuura chakabudiswa muna 2021, chikwata chaProf. Choo chakanga chagadzira chikuva chekuongorora chiziviso umo zviratidzo zveSERS zvakanyanya zvinogadzirwa neAuNPs zvakafanana zvakarongwa mumakomba eAuNDS kuburikidza nemaitiro anonzi DNA hybridization. Kubva pane zvakambowanikwa izvi, Prof. Choo nechikwata chake vakagadzira chinyorwa cheSERS-PCR chikuva chekuongororwa kweCOVID-19.
Iyo ichangobva kugadzirwa SERS-PCR assay inoshandisa SERS masiginecha kuona "bhiriji DNA" -diki DNA probes inopunzika zvishoma nezvishoma pamberi pechinangwa chemajini. Naizvozvo, mumasampuli kubva kuvarwere vane hutachiwona hweCCIDID-19, kuwanda kwebhiriji DNA (uye nekudaro iyo SERS chiratidzo) inoramba ichidzikira nekufambira mberi kwePCR kutenderera. Mukupesana, kana SARS-CoV-2 isipo, chiratidzo cheSERS chinoramba chisina kuchinjika.
Chikwata chakayedza mashandiro ehurongwa hwavo vachishandisa maviri anomiririra mamaki eSARS-CoV-2, anoti, hamvuropu protein (E) uye RNA-inotsamira RNA polymerase (RdRp) majini eSARS-CoV-2. Nepo makumi maviri neshanu kutenderera kwaidiwa kuti RT-PCR-yakavakirwa kutariswa, iyo AuNDS-yakavakirwa SERS-PCR chikuva chaingoda mitsetse masere chete, ichideredza zvakanyanya nguva yekuyedza. "Kunyangwe mhedzisiro yedu iri yekutanga, inopa humbowo hwakakosha-hwe-chirevo chechokwadi cheSERS-PCR senzira yekuongorora. Yedu AuNDS-yakavakirwa SERS-PCR tekinoroji inovimbisa nyowani mamorekuru yekuongorora iyo inogona kupfupisa zvakanyanya nguva inodiwa yekuonekwa kwemajini kana ichienzaniswa neyakajairwa RT-PCR maitiro. Iyi modhi inogona kuwedzeredzwa nekubatanidza otomatiki sampler kugadzira inotevera-chizvarwa molecular diagnostic system, "anotsanangura kudaro Prof. Choo.
Chokwadi, SERS-PCR inogona kuve chishandiso chakakosha mune yedu arsenal kurwisa COVID-19 denda. Inogonawo kugadzira shanduko yeparadigm mumunda wekuongorora mamorekuru, kushandura mabatiro atinoita zvirwere zvinotapukira uye kugadzirisa denda remangwana.